कोरियाका मन्त्रि बैठकमा सुत्दा मारिए नेपालमा चाही अधिकाम्स भ्रस्ट तन्नमहरु नै नेतागिरी गरि रहने? ~ Khabardari.com
कोरियाका मन्त्रि बैठकमा सुत्दा मारिए नेपालमा चाही अधिकाम्स भ्रस्ट तन्नमहरु नै नेतागिरी गरि रहने?
4:43 PM admin No comments
कानुनी विधिको साशन भएको मुलुकमा मानवले मानवलाइ मारिनु पक्कै पनि निन्दनिय काम हो तर भ्रस्ट हरुले अनेक तिकडम गरेर, अकर्मन्यताले दैनिक जनताको जीवन जानु तिनले गरेको जन हत्या हो । जनता भोक , रोग र बास नपाएर मर्ने देशमा विलाशी गाडी र सुबिधा लिने पैसा र पहुच ले शक्तिको दुरुपयोग गर्ने मन्त्रि बन्ने अनि जनताको विपक्षमा काम गर्ने हरुलाई जनताले सधै माफी दिइरहने ? सधै फूलमाला ले स्वागत गर्नु पर्ने ?
निरंकुस भनिएको उत्तर कोरियामा यस्तो खबर छ । उत्तर कोरियाका शिक्षा मन्त्री मारिएका छन् । दक्षिण कोरियाली सरकारका अनुसमार शिक्षामन्त्री किम याङ्ग जिनको मृत्यु भएको घोषणा गरेको छ ।
उनलाई ‘एन्टी एयरक्राप्ट गन' ले हानेर मानिरएको समाचार अखबारहरुमा छापिएका छन् ।
उत्तर कोरियाली नेता किम जोन उनले बोलाएको बैठकमा मन्त्री जिन सुतेको पाइएको थियो । त्यसपछि उनलाई भष्टाचार गरेको आरोप लगाएर जाँचबुच गरिएको थियो ।
यसै महिना उत्तर कोरिायका उप रावदूत थाहे योंगले लण्डनमा रहेको दक्षिण कोरियाको दूतावासमा शरण लिएका थिए । उनलाई उत्तर कोरियाले बच्चालाई बलात्कार गरेको तथा गोप्य सूचना सार्वजनिक गरेको आरोप लगाएको थियो ।